NGABA USHELDON OMNCINCI KWINETFLIX E-UK? ULWAZI LOSASAZO LWAMVA NJE - UMABONWAKUDE
Ngaba uSheldon omncinci kwiNetflix e-UK?
Sele kusondele iminyaka emithathu ukusukela oko i-CBS ithatha ixesha elide i-Sitcom ethi The Big Bang Theory yafikelela esiphelweni emva kwamaxesha ali-12, kodwa ngethamsanqa kubalandeli, ilifa lomboniso liya kuqhubeka ixesha elide ukuya kwixesha elizayo ngenxa ye-spin-off prequel Young Sheldon.
I-prequel, egxile kwi-Big Bang Theory ka-Sheldon Cooper njengomntwana oneminyaka elithoba ubudala, ngoku usasaza isizini yakhe yesihlanu kwi-CBS e-US.
Abalandeli abajonga kuthotho lwamva nje ngokuqinisekileyo baya kuziva bengonwabanga, njengoko isiqendu esilandelayo siza kuba neThe Big Bang Theory inkwenkwezi eyothusayo uSimon Helberg ebuyela kwindalo iphela njengoHoward Wolowitz.
Ethetha nge-prequel ye-Big Bang crossover yamva nje, umvelisi ophetheyo uMolaro uxelele Umgca weTV ukuba ukubonakala kukaHelberg kwisizini entsha kwakumnandi kakhulu.
Siyakuthanda ukukwazi ukuhlola imvelaphi kaSheldon Cooper veki nganye USheldon oselula , kodwa kuhlala kumnandi ngakumbi xa sikwazi ukubandakanya amaqanda e-Easter Theory Big Bang kwi-storylines, wathi.
Ukuqalisa ukusebenza noSimon kwakhona ukunceda ukuchaza intiyo ka-Sheldon ende yobunjineli yayiliphupha elizalisekileyo. UJim noSimon - nakwilizwi kwiZoom - abaphoswanga kukubethwa kwabo njengoSheldon Cooper kunye noHoward Wolowitz, wongeze watsho.
Akuyomfihlo ukuba abanye abalandeli beThe Big Bang Theory abavuyiswa ncam sisimo sengqondo esikhululekileyo sokugcina ukuqhubela phambili, kunye nomboniso oye waba phantsi komlilo kwiminyaka emininzi yemingxuma kunye nokungahambelani, kunye nenkangeleko yeHelberg umzamo wokuseka unxibelelwano phakathi kwe-prequel kunye nochungechunge lokuqala.
Kodwa uphi uSheldon osemncinci onokubukelwa e-UK? Qhubeka ufunda ngolwazi lwamva nje lostrimisho.
USheldon omncinci wenziwa ukuba afumaneke kwiNetflix e-UK nge-1st kaNovemba ka-2021, kunye namaxesha amathathu ngoku akhoyo ukuba abukele.
Ngelishwa, i-Young Sheldon isizini yesi-4 kunye ne-5 ayifumaneki ukuba ibukele kwiNetflix ngalo mzuzu ngexesha.
UJim Parsons kunye no-Iain Armitage njengoSheldon Cooper ukutyhubela iminyaka (E4, HF)
Lo mboniso wawusasazwa kwi-CBS e-US kwaye yaqala nge-25 kaSeptemba 2017, kwaye ngoku ikwisizini yayo yesihlanu, kunye neziqephu ezisasazwa ngeveki njengenxalenye ye-CBS 'ngoLwesine ebusuku uluhlu lwama-comedies. Ukongeza kokusasazwa bukhoma ngoLwesine CBS , i-spin-off show inokubukelwa kwi-imfuno ngosuku emva kokuba isiqendu sivuliwe IParamount Plus e-US.
Iziqendu zamva nje zinokusasazwa kwamanye amaqonga ase-US kubandakanya Ividiyo enkulu yeAmazon , Umabonwakude weFubo , I-DirectTV kwaye Hulu TV .
Ndingabukela phi i-Young Sheldon isizini yesi-4 e-UK?
Ixesha lesine le-Young Sheldon yaqala nge-5 kaNovemba ka-2020 kwi-CBS e-US, ngaphambi kokufumana i-premiere yase-UK kwi-E4 ngoLwesithathu we-20 ka-Okthobha ka-2021.
Lilonke ixesha lonyaka lisafumaneka ukuba libukele kwi-Channel 4 yenkonzo yokusasaza All4.
Kungenjalo, unokubukela i-Young Sheldon isizini yesi-4 e-UK Ividiyo enkulu yeAmazon , kunye namaxesha amathathu okuqala - nangona iziqephu zingabandakanywa kwi-Prime subscription yakho, oku kuthetha ukuba kuya kufuneka uzithenge endaweni yoko.
Ngelishwa, abalandeli be-Big Bang Theory kuya kufuneka balinde ixesha elide kwi-Young Sheldon isizini ye-5 yase-UK yokukhupha.
Amaxesha amathathu okuqala kaSheldon omncinci afikile kwiNetflix e-UK
Umalunga nantoni u-Young Sheldon?
Ngokungafaniyo ne-Big Bang Theory, egxile kubomi obudala buka-Sheldon Cooper, u-Young Sheldon ujongene nobuntwana buka-Cooper njengoko ezama ukuhamba ubomi bemihla ngemihla nosapho lwakhe olubonakala luqhelekileyo eTexas.
Misela malunga namashumi amabini eminyaka ngaphambi kokuqala kweTheory Big Bang, i-prequel iqala ngokufika komntwana oneminyaka eli-9 ubudala kwisikolo samabanga aphakamileyo - kwaye ngokukhawuleza esokola ukuze ahambelane nobuntu bakhe obungaqhelekanga kunye nobukrelekrele bakhe obukhulu.
Uthotho lwamahlaya luza ngoncedo lweWarner Bros Television kunye neenkwenkwezi u-Iain Armitage odlala inguqulelo encinci yeCooper. Abalingisi bakwaZoe Perry, uLance Barber, uRaegan Revord, uMontana Jordan kunye noMat Hobby.
UJim Parsons, oneenkwenkwezi njengomntu omdala u-Cooper kumboniso wokuqala, uye wachaza i-prequel ukususela ekuqaleni.
Amaxesha amathathu okuqala kaSheldon omncinci ayafumaneka ukuba asasazeke ngoku kwiNetflix. Jonga uluhlu lwethu lolona thotho lubalaseleyo kwiNetflix kunye neefilimu ezilungileyo kakhulu kwiNetflix, okanye ubone enye into ekhoyo ngeSikhokelo seTV.
phakathi kwethu umhla omtsha wokukhutshwa kwemephu
indlela yokuthenga incwadi evakalayo
ps5 uk uthenge phi